Olona hlobo luhle lweGuy Guys imidlalo ye-Android | I-Androidsis
UManuel Ramirez | 05/04/2021 20:00 | Imidlalo ye-Android
Phantse kuyothusa ukuba nembono yokuqhekeka komhlaba kwaye uyikhuphe kumdlalo ngaphandle kohlahlo-lwabiwo mali olwaneleyo lokuchitha kwintengiso kunye nentengiso, kwaye ke, ngelixa ikhutshelwa kwiitoni ezininzi, unokufikelela kubaphulaphuli abakunika amaphiko ngokwaneleyo ukuba ube liGuy Guys okanye iStardew Valley.
Masihambe kunye Eyona midlalo mihle ye-Fall Guys ye-Android Kwaye kwimicimbi yeenyanga, ukusukela ehlotyeni, baphume njengokhula lubumba iziseko zalo mdlalo zafunyanwa luphononongo oluphetheyo Ukuphuhliswa kweMidlalo ye-Epic kwiveki ephelileyo. Ziphose kuyo.
1 Amadabi eRoyale
4 Iidudesi eziwayo
5 Ukuwa kweFluffy: Khawuleza kwaye uphephe ingozi!
6 Iindlela zokuba ziimfama zokufa: iiSuperheroes
7 Hex Iinkwenkwezi
8 Isilayidi esinomoya
9 AbaGwebi bokuGqibela
10 Qhuba iGuys: Knockout Royale
11 Iqela Royale: Musa ukuwa!
12 Abafana beSoda
13 Ukuwa kwabafana: Umdyarho wokuGqibela weRace
14 Abafana beFur-Ultimaten Knockout
Y Ngelixa silinde ukuwa kwamaGosa ukuba afike kwi-Android ngaxa lithileNjengoko kuphuhliswa, siza kuhamba nale, eyokuqala kuluhlu lwee-Guys zohlobo lwemidlalo. Apha singena ukudlala nabadlali abangama-32 kwimephu enkulu okanye kwibala lemidlalo apho kukho iintlobo ngeentlobo zezixhobo kunye nezixhobo zokuzikhusela kwabanye. Eyona nto ibaluleke kakhulu, nganye umdlalo uqhubeka imizuzu embalwa. Umbono we-Isometric wokusondela kwi-Battle Royale kune-Fall Guys, kodwa yona isimahla.
Umthuthukisi: Ixesha elizayo
Ukuba oko ifana kakhulu nokuwa kwabafana kwaye ikwabonelela abadlali abaninzi ukuze ube nexesha elimnandi nalawo mathuba ahlekisayo olu hlobo lomdlalo oluhlala lunika wona. Ngokukodwa ngenxa ye-physics kunye nokuba iimvavanyo zoBumnandi obuMthubi (ezibonisa umabonwakude we-90 kwi-Tele 5) ziyonwabisa kakhulu. Isinika iindlela ezintathu zomdlalo: umceli mngeni, imo yokukhwaza kunye nemowudi ngokuchasene nabanye. Singakwazi ukuqhubela phambili ukujongana nenqwaba yabadlali.
Umthuthukisi: ICrystal Pug Pty Ltd
Ke unako Ukuqaqambisa uNoodleman.io kukukwazi kwayo ukubonelela ngabadlali abaninzi zombini yasekhaya nakwi-intanethiinokuba njalo umdlalo ogqibeleleyo wee-mobiles ezimbini xa sisekhaya. Ikwanayo into enomdla ye-physics kunye noyilo lobudenge njengomdlalo ngoku othengwe yiMidlalo ye-Epic. Inazo nezinye iincukuthu ezisivumelayo ukuba sikwazi ukuhleka ngamaxesha athile, njengoko abanye abadlali bephawula. Mahala njengeyona midlalo ikuluhlu.
UNoodleman.io-Yilwa iMidlalo yeQela
Apha singena kwimidlalo yabadlali abangama-39 ekuya kufuneka sigqibe kuqala kwaye sibashiye abanye ngaphandle komdyarho siye empumelelweni. Abayekanga ukusebenzisa ukuwa ukuzichonga, kwaye kungenxa yomnqweno wokuba bakwazi ukudlala umdlalo onjenge-Fall Guys, olu luhlu lwama-clones aluyeki ukutsala umdla. Kwaye sithetha ngemidlalo efikelela kumashumi okanye kumakhulu amawaka ophononongo. Sele inabadlali abaninzi njengolunye uhlaziyo olwafika mva kunokuba lwalukhutshiwe, ngenxa yoko alusweli nto.
Ukuwa kweDudes (UkuFikelela kwangoko)
Umthuthukisi: I-PepUp Studios
Ukuwa kweFluffy: Khawuleza kwaye uphephe ingozi!
Kwaye ngoku siya kwesinye sezo zinokuhlolwa okungaphezulu kwe-100.000, kodwa loo nto isuswe kude kubadlali abaninzi ukuze ibe ngumdlali omnye wohlobo lomdlalo weGuy Guys. Ewe kuya kufuneka uphephe uninzi lwezithintelo ukuze umlinganiswa ophambili akwazi ukuphuma kula manqanaba asebenze kakuhle ngesandla ukuze kube nzima ukuwoyisa. Umdlalo kuyo yonke iminyaka ongenakuphoswa, nangona uya kuwuphosa umdlalo wabadlali abaninzi kunye nabalinganiswa abasileyo abanento ethile yemvelo.
Umthuthukisi: YINTONI (imidlalo)
Iindlela zokuba ziimfama zokufa: iiSuperheroes
Siza kuthatha abadlali abaninzi kwakhona kumdlalo wenqanaba apho siphatha i-superhero ngokubukeka okuhlekisayo kwaye Siza kujongana ne-AI okanye iArtificial Intelligence yomdlalo. Oko kukuthi, kufuneka siphephe imiqobo, sixhume kwaye sihambe ngalo mzuzu ngqo ukuze singatyiwa ngoomatshini abahlukileyo kwinqanaba ngalinye. Ngokuthi, ngendlela nganye nganye yenzelwe ukuba ifunde intshukumo nganye kwaye iyokuvavanywa ngokusekwe kwiimpazamo. Mahala kwaye nangona ingenakho ukhuphelo oluninzi njengabanye, ngumdlalo ogcinwe kakuhle kuwo onke amanqanaba.
Umthuthukisi: Oololiwe beMetro Melbourne
Omnye wabafana beGuy Guy apho Ewe sinabadlali abaninzi abakwi-Intanethi kwaye olo lulwandle lokonwaba, kuba sinabo bonke abadlali abatsiba ukusuka apha ukuya apho bezama ukuwela kwizikwere ezinamacala amabini ezakubavumela ukuba bahlale bephilile ngelixa abanye bephulukana nezabo. Ungaya ukuvula izikhumba kwaye wonwabe ngomdlalo ongenazinto zininzi zokukhuphela kunye nokuphononongwa, kodwa xa uzama ngokuqinisekileyo uya kuba nemidlalo elungileyo.
Umthuthukisi: Isitudiyo esingunaPhakade
Siphambuka kancinci kumdlalo ofanayo kubadlali abaninzi, kodwa inombono onomdla kunye nezo mifanekiso ze-isometric kufuneka sigxile kumbhobho apho izilayidi zethu zityibilika khona. Kuya kufuneka sisebenzise amahla ndinyuka ukuzama ukugqiba phambi kwe-AI esijamelana nayo. Umdlalo onemibala emininzi kunye neekopi zobuhle balapha ngasentla. Ikwajolise kwisambrela esiya kusinceda sisebenzise umoya ukuhamba ngokukhawuleza. Umdlalo wasimahla ngaphandle kophononongo oluninzi, kodwa sicebisa ukuba kule migca kwi-Androidsis.
Umthuthukisi: Umdlalo ofanelekileyo Studios
Akucaci kuthi ukuba sidlala nabadlali okanye i-bots, Kodwa sijamelene nomnye umdlalo owenziwe ngumlinganiswa ophambili kolu luhlu. Kukude kumanqaku aphakathi kunye nokukhutshelwa kwabanye, kodwa sinokukubeka kwi-orbit ye-Fall Guys. Imibala eyahlukeneyo kunye nenqanaba lokonwaba kwethu.
Qhuba iGuys: Knockout Royale
Imizobo elungileyo kakhulu kunye nesitayile esihle, isiseko esinophuhliso olukhulu kunye nabadlali abaninzi abenza ukuba ibe yeyona idlalwe kakhulu kolu luhlu. Asinakumshiya lo mfo wokuwa kuba uphakathi kwezona zilungileyo. Eyona ngxaki inkulu kukuba imidlalo i-asynchronizedOko kuthetha ukuba udlala "nezithunzi" okanye "iziporho" zabanye abadlali. Ndiyathetha, bathatha igama lakhe kwaye kujongeka ngathi ungumdlali weqonga, kodwa yena uyibhot. Ngayiphi na imeko, oko akuthethi ukuba sinemvakalelo yokudlala ngokuchasene nabanye.
Umthuthukisi: IGreenPixel Ltd
Iqela Royale: Musa ukuwa!
Apha sinabadlali abaninzi ngexesha lokwenyani lokujongana nabanye abalinganiswa abahlekisayo abangabadlali bokwenyani. Ikwasebenza kakuhle kakhulu kwaye inayo amanqaku aphezulu aphakathi kunye nokuphononongwa okungaphezulu kwama-40.000. Ewe kuyinyani ukuba izikhumba kufuneka zithengwe, kwaye zinayo loo ntlawulo yokuphumelela inqaku labathile ngokukodwa, kodwa ngokubanzi kuyonwabisa njengomnye wemidlalo ebalaseleyo kuluhlu lokukhuphisana nokuhleka ngokungapheliyo.
Ewe ngokwenene I-Soda Guys ilumkisa kwiphepha elikwiGoogle Play iyafana neeGuy Guys, yinto ethile. Kwaye bayazi kakuhle ukuba bakope ubuchwephesha obusisiseko bomdlalo, nangona iiasethi zabo okanye iiasethi zezabo. Ke ukuba ufuna into efana nale ikhankanywe apha ngasentla ethengwe yiMidlalo ye-Epic, musa ukuchitha ixesha ukuyivavanya nge-physics yayo, abadlali bexesha lokwenyani kunye nalawo manqanaba aza kusifaka kuvavanyo. Nangona ihlala iyimfihlakalo ukuba sidlala ngokuchasene ne-bots okanye abadlali ngexesha lokwenyani ...
Soda Guys (ukufikelela kwangoko)
Ukuwa kwabafana: Umdyarho wokuGqibela weRace
Ngemidlalo yabadlali abangama-30 siya ngqo kubadlali abaninzi abakwi-Intanethi ngeendlela ezili-12 zomdlalo ohlukeneyo kunye nabalinganiswa abangama-51 ohlukeneyo onokuvula. Inokuba yenye yeekopi ezinomdla kakhulu kuludwe lweeGuy Guys, ngakumbi kuba akubizi mali ininzi ukubamba umxholo ukuze uvule kwaye kuba unabalinganiswa abaninzi. Sidlulise uphononongo olungaphezulu kwama-4.000 ukuba yenye yezona zidlalwe kakhulu kwaye zibeka ngendlela elungileyo kwiVenkile yokuDlala. Abalinganiswa abanakoyilwa njengoko unokulindela, kodwa xa iyonke ngumdlalo olungileyo wokuxhoma abanye abantu.
Abafana beFur-Ultimaten Knockout
Kwaye siwubeka lo mdlalo kuluhlu kuba abasiki iikona ekusebenziseni igama elifanayo, nangona besebenzisa "uboya" ukusuka "kwiifurries" ukuze sibe nezilwanyana zasekhaya ukuba zizilwanyana okanye akunjalo. Inabadlali abaninzi abakwi-Intanethi, imizobo esemgangathweni esemgangathweni, ukugqitywa kobugcisa kunye nokuncinci okuthintela okanye kungcolise amava okudlala. Kuyinyani ukuba akukho lula njengabanye, kodwa ikwenza ubambeke nangakumbi ukuba ube yenye yeeFlash Guy yohlobo lwemidlalo esinayo kwiselfowuni yethu ye-Android.
Abafana beFur-Ukhuphiswano lokugqibela
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Eyona midlalo mihle ye-Fall Guys ye-Android